UEFA oo baaritaan ku bilowday Neymar JR kadib aflagaadadii uu u geystay garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii PSG v Manchester United. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
UEFA oo baaritaan ku bilowday Neymar JR kadib aflagaadadii uu u geystay garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii PSG v Manchester United.
By admin on 23/03/2019 No Comment
Sabti, Maarso, 23, 2019 (HNN)- Xiriirka kubadda cagta UEFA ayaa ku dhawaaqay iney baaritaan ku fureen laacibka kooxda kubadda cagta PSG ee Neymar JR kadib aflagaadadii uu u geystay garsoorihii hayay kulankii kooxdiisa PSG isaga hartay tartanka Uefa Champions League.
6dii bishii Marso ee sanadkaan waxaa garoonka kooxda PSG ka dhacay kulankii labaad ee PSG v Manchester United waxaana 1-3 ku guuleysatay kooxda Manchester United oo iska xaadirisay wareega 8aad ee tartanak UCL kadib markii dhamaadkii cayaarta uu gool Rigoore ah dhaliyay Marcos Rashford.
Kadib cayaartaas laacibka kooxda PSG Neymar JR ayaa bogiisa Instagramka soo dhigay hadal aad u kulul qaarkooda ay ahaayeen aflagaado ku socoto garsoorihii hayay cayaartaas wuxuuna Neymar ka xanaaqsanaa rigooradii lagu abaal mariyay kooxda Manchester United.
Hadaba xiriirka kubada cagta yurub ee UEFA ayaa ku dhaawaqay in hadaladii uu soo qoray Neymar ay kahor imaanayaan qawaaniinta anshaxa ee UEFA sidaas darted gudiga anshaxa ee UEFA waxay baaris ku sameyn doonaan laacibkaas iyagoona su’aalo ka weydiin doonaan hadaladii aflagaadada ahaa.
Waxaa macquul ah in ganaax maaliyadeed garka loo galiyo amaba kulamada qaar ee tartamada yurub laga ganaaxo.
Maalintii daraad ayay aheyd kadib markii xiriirka UEFA uu ganaax maaliyadeed garka u galiyay laacibka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo oo ku eedeysnaa inuu aflagaado u geystay jamaahiirta kooxda Atlatico Madrid.
UEFA oo baaritaan ku bilowday Neymar JR kadib aflagaadadii uu u geystay garsoorihii dhex dhexaadinayay kulankii PSG v Manchester United. added by admin on 23/03/2019